Labo ka mid ah xisbiyada talada haya oo soo bandhigay miisaaniyada deyrta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Labo ka mid ah xisbiyada talada haya oo soo bandhigay miisaaniyada deyrta
La daabacay fredag 17 augusti 2012 kl 12.40
Xisbiyada KD iyo C ayaa soo bandhigay qorshayaashooda miisaaniyada deyrta fooda inagu soo heysa iyada oo hoggaamiyayaasha labada xisbi ay ka hadleen arrimaha ay siin doonaan ahmiyada.
Xisbiga Kristdemokrat ayaa sheegay in hindisahooda uu yahay in la kordhiyo lacagta la yiraahdo ''grundersättning'' ee la siiyo qoysaska leh caruurta iyo waalidiinta doonaya in waqti dheer caruurtooda la joogaan xaafadaha.
Hogaamiyaha xisbiga KD ahna wasiirka arrimaha bulshada Göran Hägglund ayaa sidoo kale doonaya in imminka la oofiyo ballantii aheyd in hoos loo dhigayo cashuurta dadka howlgabka ah.
- Waxaan balan qaadnay in aan hoos u dhimi doonaa cashuurta dadka waaweyn ee howlgabka ah 2,3 milyaardi mudada aan heyneyno talada. Waxaan hoos u dhignay cashuurta howlgabka tiro saddex tallabo ah waxaan dooneynaa in tallaabada afaraad aan ku sammeyno sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ah, ayuu yiri wasiirka.
Hoggaamiyaha xisbiga Center-ka ahna wasiirka ganacsiga Annie Lööf ayaa bedeshay aragtideeda cashuurta shirkadaha iyada oo imminka raacday aragtida xisbiyada kale ee isbaheysiga la ah oo ah in hoos loo dhigo cashuurta shirkadaha. Wasiirda ayaa u aragta in dhimista cashuurta shirkadaha ay muhiim u tahay ganacsiga dalka.